ताजा अपडेट : भरतपुरमा रेनुको अहिलेसम्मकै धेरै अग्रता, कसको कति छ मत ? • raradiodarpan.com
ताजा अपडेट : भरतपुरमा रेनुको अहिलेसम्मकै धेरै अग्रता, कसको कति छ मत ?
भरतपुर महानगरपालिकामा पाँचदलीय गठबन्धनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उम्मेदवार बनेकी रेनु दाहालले तीन हजार १२६ मतले अग्रता लिएकी छिन् । महानगरपालिकामा ४१ हजार ४१४ मतगणना हुँदा दाहालले अग्रतालाई फराकिलो बनाउँदै लगेकी छिन् । दाहालले १५ हजार ७४७ मत प्राप्त गर्दा नेकपा (एमाले)बाट प्रमुखका उम्मेदवार विजय सुवेदीले १२ हजार ६१९ मत प्राप्त गरेका हुन् । रेनुले तीन हजार एक सय २८ मतले अग्रता लिएकी हुन् । यस्तै स्वातन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले ६ हजार ५१३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
भरतपुरमा ४१ हजार ४ सय १४ मतगणना रेनुले अग्रता बढाउँदै लगेकी हुन् ।उपप्रमुखमा गठबन्धनबाटै कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले १८ हजार २४० मत प्राप्त गर्दा राप्रपाकी हिमला गुरुङले १० हजार १३६ मत प्राप्त गरेकी छिन् । भरतपुर महानगरमा वडा नं १, २, ४, ५, ६ र ८ गठबन्धनबाट कांग्रेसका, ७ मा गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार र ३ मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । वडा नं ९ र १० को गणना भइरहेको छ । ९ र १० मतगणनामा गठबन्धनका उम्मेदवार मतगणनामा अगाडि छन् । भरतपुर महानगरमा एक लाख २७ हजार ८३९ मत खसेको छ ।
यो पनि ..मोरङको बूढीगङ्गामा कांग्रेसको जित
गत शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आजसार्वजनिक भएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका अनुसार अध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसका जीतनारायण थापा मगरले आठ हजार २९९ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का बलभद्र सरदार थारुले सात हजार ८८० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
पाध्यक्षमा कांग्रेसकी अमृताकुमारी गच्छदारले नौ हजार ५० मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्दी एमालेका तुलसीकुमारी कुंवरले छ हजार २२३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । विगतमा एमालेको वर्चस्व रहेको सो पालिकामा यस वर्षको निर्वाचनमा पाँच वडामा वडाध्यक्ष पदमा कांग्रेस, एमाले र अर्कोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् । जिल्लामा अब नौ वटा पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउ बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।